07/22/14 ~ MM Daily Star
ကျင့်ဝတ်နားမလည်သော မီဒီယာများသို့ ဦးထွန်းလွင် နော...
ဗိုလ်ချုပ်ခင်ရီက ရဲချုပ်နဲ့ပြောင်းလာချိန်နှင့် က...
ကျင့်ဝတ်နားမလည်သော မီဒီယာများသို့ ဦးထွန်းလွင် နောက်ဆုံးအကြိမ် သတိပေး...
15:55 သောက်တလွဲ စတုတ္ထမဏ္ဍိုင် No comments
( ယခု ဂျာနယ်ကတော့ ဖွဘုတ်ပေါ်မှာ အ ban ဆုံး Eleven ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ )
ကျွန်တော့ရဲ့ website, facebook တို့မှာဖေါ်ပြထားတဲ့ Post တွေဟာ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်(ကိုယ်တိုင်)အချိန်ကုန် လူပန်းခံပြီး ဖန်တီးထားတဲ့ ကိုယ်ပိုင် Post တွေဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် သူတစ်ပါးဟာကို ကိုးကားရင်လည်း Reference, Source တို့ကိုအမြဲဖေါ်ပြပေးပါတယ်။
ကျွန်တော့ တင်ပြချက်တွေဟာ Public လုပ်ထားတဲ့အတွက် မည်သူမဆိုကြည့်နိုင်၊ ဖတ်နိုင်၊ မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ပရဟိတ ဒါန လို့ သဘောထားပါတယ်။ အဲ အကိုးအကားအဖြစ် သုံးမယ်၊ဖေါ်ပြမယ်၊ ပုံနှိပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒေါက်တာထွန်းလွင် (MCCW) ဆိုပြီးဖေါ်ပြပေး ဖို့လည်း မေတ္တာရပ်ခံထားခဲ့တာ အားလုံး အသိဖြစ်ပါတယ်။
မနေ့ကထွက်တဲ့ နာမည်ကြီး အရွယ်ကြီးကြီးနဲ့ အလွန်လက်သံပြောင်ပေတယ်လို့ နာမည်ကြီးလှတဲ့ ဂျာနယ်ကြီးတစ်စောင်က ကျွန်တော့ facebook ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် (ကိုယ်တိုင်)ဖန်တီးထားတဲ့ Post တစ်ခုကို ခပ်တည်တည်နဲ့ မျက်နှာဖုံးတင်ပြီး သုံးထားပေမယ့် စောစောက ကျွန်တော်မေတ္တ္တာရပ်ခံထားသလို Source Reference တစ်ခုမှ မပါဘဲ ခပ်တည်တည်ကြီးသုံးထားတာကတော့ ဂျာနယ်ကြီးတစ်စောင်ဖြစ်ပါလျက်နဲ့ ကျင့်ဝတ်ကို နားမလည်တာလား၊ သူတစ်ပါးကိုတော့ ဝေဖန်တတ်သလောက် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော့ မဝေဖန်တတ်ဘူးလား ဆိုတာကိုတွေးမိတော့ .....
ပြီးခဲ့တဲ့ စနေနေ့ ၀ါရှင်တန်မှာ ရှိတဲ့ ဗီအိုအေ မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်က ကျွန်တော့်ကို တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းလုပ်ဖို့အတွက်ဖိတ်ကြားပါတယ်။
သတ်မှတ်ချိန်ရောက်တော့ ကျွန်တော့်ကို တည်းခိုရာဟိုတယ်မှာ ဗီအိုအေ ၀န်ထမ်း တစ်ဦးက လာကြိုပါတယ်။ ဗီအိုအေ ရုံးချုပ်နေရာကို ရောက်တော့မှ ၀န်ထမ်းဖြစ်သူက နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပါလားလို့ မေးပါတယ်။ သူ့ဘက်ကလည်း ကြိုသတိပေးဖို့ မေ့နေလို့ဖြစ်ကြောင်း၊ ရုံးချုပ်ကို ၀င်ရင် ၀န်ထမ်းကဒ် ဒါမှမဟုတ်အမေရိကနု်နုိုင်ငံသား ဆိုရင် အစိုးရက ထုတ်ပေးထားတဲ့ အသိအမှတ်ပြုကဒ်ပြားတစ်ခုခု ဥပမာ ယာဉ်မောင်း လိုင်စင်လုိုတယ်၊နုိုင်ငံခြားသားဆိုရင် နုိုင်ငံကူးလက်မှတ်လိုတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ကြိုတင်သတိပေးဖို့ မေ့နေတဲ့အတွက်လည်းသူက တောင်းပန်ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်ခင်ရီက ရဲချုပ်နဲ့ပြောင်းလာချိန်နှင့် ကျွန်တော့်လုပ်ခဲ့ရသော လုံခြုံရေး
15:51 သူ့အတွေး သူ့အမြင် No comments
လုံခြုံရေး နဲ့ ပတ်သက်လို့….
အကြမ်းဖျင်းလေး ပြောပြချင်တယ် ….
လုံခြုံရေး လို့ ဆိုတာနဲ့…
အားလုံးက ပြေးမြင်တာက …
ယူနီဖောင်းဝတ် သေနတ်ကိုင်ပြီး ….
ဂိတ်မှာ မတ်တပ်ရပ်စောင့်နေတဲ့ ပုံကို ...
အဲဒီဂိတ်ကို ဖြတ်ပြီးရင် စစ်ဆေးခံပြီးပြီ …
အတွင်းမှာ ထပ်မေးရင် ....
သိပ် မကြိုက်ကြတော့ဘူး …
တကယ်တော့ လုံခြုံရေးဆိုတာ …
ပြီးတယ်လို့ ကို မရှိဘူး ….
ကိုယ် အကာအကွယ် ပေးရမှာက …
လူလား ၊ ပစ္စည်းလား ၊ နေရာလား …
ဒါတွေပေါ် မူတည်ပြီး ....
ပရိုဆီဂျာတွေ အများကြီးကွဲသွားတယ် …
လုံခြုံရေးပေးတာကို ပဲ …
အကြမ်းဖျင်း ရှင်းပြတော့မယ် …
ဧရိယာတစ်ခုကို လုံခြုံရေးပေးတော့မယ်ဆို ….
ပထမဆုံး စလုပ်ရတာက …
အဲဒီနေရာကို အစောကြီး ကြိုပြီး …
ပြီးတာနဲ့ပိုက်စိတ်တိုက် စစ်ဆေးတော့တာပဲ …
လူ ၊ စက်ကိရိယာ ၊ ခွေးတွေ အားလုံးသုံးတယ် …
စစ်ဆေးတာတွေက ပိုဆိုးလေပဲ …
ဥပမာ - နှစ်နိူင်ငံ လျှို့ ဝှက်ဆွေးနွေးပွဲမျိုးဆို …
Call လုပ်မယ့်အခန်းကို တစ်လက်မ မကျန်စစ်တယ် …
နံရံတွေပါ နားကြပ်နဲ့ထောက်စစ်တယ် ..
မသင်္ကာရင် ဓာတ်မှန်ရိုက်ကြည့်တယ် …
အဲလောက်ထိ လုပ်တာ …
ကဲ လိုက်တာလို့ မပြောနဲ့ ဦး …
ရန်ကုန်က အမေရိကန်သံရုံးကို ပြင်ဆင်ရေးလုပ်ရင် …
သူတို့ သုံးနေကြ ကုမ္ပဏီ ရှိတယ် …
နံရံကို အပေါက်ဖောက်တယ်နော် …
ဘေးက တစ်ယောက်က ရပ်ကြည့်နေတာ …
ပြီးပြီလား ..နေအုန်း …
အလုပ်သမားတွေ အားလုံးရပ်ထား …
သူ့ လုံခြုံရေးက အာ့ဖောက်ထားတဲ့အပေါက်တစ်ခုချင်းစီ …
ဓာတ်မီးနဲ့လိုက်ထိုးကြည့်တယ် …
ပြီးမှ အိုကေ … ရပြီ ... Screw စုပ်တော့ …
အာ့လို စစ်တာ ….
( အသံဖမ်းစက် ထည့်မှာစိုးလို့)
အဲ ….အထပ်ထပ် စစ်ပြီးပြီ …
ပိုက်စိတ်တိုက် စစ်ပြီးပြီနော် ….
လုံခြုံရေး အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်က ...
သူခေါ်ခိုင်းထားတဲ့....
သက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင် ပညာရှင်အဖွဲ့ တွေကို …
လုံခြုံရေး Clearance လက်မှတ်ထိုးပေးရတယ် …
အာ့အချိန်က စပြီး ဒီဧရိယာကြီး တစ်ခုလုံး …
သူ့ တာဝန်ဖြစ်သွားပြီ ….
စနစ်တကျ စစ်ဆေးပြီး …
Clearance လုပ်ထားတဲ့ဧရိယာတစ်ခုကို …
တင်းတင်းကြပ်ကြပ် ထပ်ထိန်းချုပ်တာက ....
လူ အ၀င် အထွက်ပဲ ….
အဲ ဧရိယာ ကို ၀င်တဲ့ ဝင်ပေါက်တွေအားလုံးမှာ ….
ကိုယ့်လုံခြုံရေးအဖွဲ့ က တစ်ယောက်က ….
ထိုင်ခုံလေးတစ်လုံးနဲ့၂၄ နာရီ ထိုင်စောင့်တာ …
အခန်းအနား မလုပ်ခင် သုံးရက်လောက် ကတည်းကပဲ …
၂နာရီတစ်ကြိမ် လူချိန်းပေးတယ် ...
လုံးဝ မထရဘူး …
ခြေလျင်စကားနဲ့ ပြောရင် …
ရှေ့ တန်းမှာ ကင်းစောင့်သလိုပဲ …
တန်းပြည့် စစ်မှုထမ်းချိန် ဖြစ်တဲ့အတွက် …
စစ်ခုံရုံးက သေဒဏ်အထိ အပြစ်ပေးလို့ ရတယ် ..
တစ်ခြား ဂိတ်ကလူတွေ …
အချက်အခြာနေရာတွေမှာ စောင့်တဲ့ သူတွေက သပ်သပ် …
ဒီအုပ်စုက သပ်သပ် …
သူတာဝန်ယူထားတဲ့ နေရာကို ....
ဘယ်သူမှ ပေးမ၀င်တော့ဘူး …
ကိုယ့်လူအချင်းချင်းလဲ တာဝန်မရှိရင် ပေးမ၀င်ဘူး …
ဒါကို … INT COVER လုပ်တယ်လို့ ခေါ်တယ် ….
ရက်စွဲတော့ မမှတ်မိတော့ဘူး ...
ဗိုလ်ချုပ်ခင်ရီက ရဲချုပ်နဲ့ပြောင်းလာတယ် …
ပြီးတော့ ရန်ကုန်မှာ သူလျှောက်ကြည့်တယ် ထင်ပါရဲ့…
ပြည်လမ်း လွှတ်တော်ထဲကို ၀င်ချလာတယ် …
အပြင်ဂိတ်ကတော့ သူ ဖြတ်လာလို့ ရတယ် …
ပြသနာက လွှတ်တော်အတွင်းကို ၀င်မယ်လုပ်တော့ …
ဗိုလ်မှူးချုပ်အပွင့် နဲ့ယူနီဖောင်းဝတ်ထားတာကို ….
ခုနက INT COVER က ….
ဒုတပ်ကြပ်က ပေးမ၀င်တော့ဘူး …
သူ ထိုင်နေတဲ့ ခုံကို ပေးတယ် …
ဗိုလ်ချုပ် ခဏထိုင်စောင့်ပါ တဲ့…
ကျွန်တော် သတင်းပို့ ပေးပါမယ်တဲ့…
လုံခြုံရေး Incharge ဗိုလ်မှူးက ….
ကျွန်တော့်ကို သွားရှင်းပြခိုင်းတယ် …
ကိုယ် လွှတ်တော်ထဲ ပတ်ကြည့်ချင်လို့ တဲ့ …
လွှတ်တော်အနှံ့ ကိုယ်တိုင် လိုက်ပြပေးတယ်…
ဘယ်အခန်းက ဘာလုပ်တာ ရှင်းပြတယ် ..
INT COVER လုပ်ထားတဲ့ ဧရိယာကိုတော့ …
သူ့ ကို တောင်းပန်ပြီး ပေးမ၀င်ခဲ့ဘူး ….
အပြန် သူ့ PSO ....
တစ်ပတ်စဉ်ထဲကောင် က ....
မျိုးဇော်ဝင်း ( ပပ၀င်းခင် အကို ) …
ကျွန်တော်ကလဲ သူ မကြိုက်တဲ့....
သူ့ နာမည်ပြောင် ကျောက်မိန် ....
( နဂါးနိူင်ဓား ရုပ်ရုင်ထဲက ကျောက်မိန်နဲ့ တူလို့) ကို ….
မကြားတကြား ရွတ်ပြီး စပ်ဖြီးဖြီး ကျန်ခဲ့တယ် …
အခမ်းအနားနေ့ မှာ ....
လူအ၀င်အထွက်ကို ထိန်းချုပ်နိူင်ဖို့….
သက်ဆိုင်ရာ ဌာနတွေက ....
ဌာနအလိုက် ၀င်မယ့်လူစာရင်း …
ဘယ်နှစ်ယောက်လဲ ၊ ဘယ်သူတွေလဲ …
နာမည် ၊ မှတ်ပုံတင် မိတ္တူ အားလုံးလာထား…
ကကလှမ်း ၊ လှမ်း၂ လုံခြုံရေးဌာနမှာ ….
အမှူထမ်းလုံခြုံရေး ဌာနခွဲဆိုတာ ရှိတယ် …
သူက ကြိုတင်စိစစ်တယ် ….
ကျေနပ်ပြီဆို အိုကေ ….
စုစုပေါင်း ဘယ်နှစ်ယောက် ….
အာ့အတွက် ရင်ထိုးတွေ ထုတ်ပေးလိုက်တယ် …
ရင်ထိုးက နီးမှ ထုတ်ပေးတာ ….
ပွဲတစ်ခုအတွက် ပုံစံတစ်မျိုး …
အရေအတွက် အတိအကျ ....
အပိုအလို မရှိ ထုတ်ပေးတာ ...
လုံးဝ ပျောက်လို့ မရဘူး ....
ဂိတ်ပေါက်မှာ ၀င်ခွင့်စာရင်းနဲ့တိုက်စစ်မယ် …
ရင်ထိုး ပါမပါ စစ်မယ် ….
ပြီးမှ ၀င်ခွင့်ပေးမှာ ….
အဲ အထဲရောက်လို့....
ရင်ထိုးဖြုတ်ဖို့ တော့ မစဉ်းစားလိုက်နဲ့….
ကိုယ်ဘယ်လောက်ပင် ချောချောလှလှ ...
လုံခြုံရေး လုပ်ရတဲ့ သူက ....
အရင်ဆုံး ရင်ထိုးပါ မပါ စကြည့်တာ …
ပြီးမှ လူကို ကြည့်တာ …
ရင်ထိုးမပါရင် အရင်လာမေးမယ် …
မပြနိူင်ရင် မေးခွန်းတွေ အများကြီးမေးမယ် …
ရူးသလို ပေါသလို လုပ်နေရင်တော့ ….
အနီးဆုံး စစ်ကြောရေးစခန်းကိုသာ လစ်ပေတော့ ….
အပြင်မှာ ရင်ထိုးကျပျောက်လာတာ ….
ဂိတ်ရောက်မှ သိတယ် ….
အခမ်းအနားကြီး တစ်ခုလုံးက …
လုံခြုံရေးတွေ အလုပ်ရှုပ်ကုန်တယ် ….
ဌာနတစ်ခုစီက အရာရှိငယ်တစ်ယောက်စီကို ....
ကိုယ့်ဆီက လူ တစ်ယောက်နဲ့တွဲပြီး ….
ဒါ ခင်ဗျားဌာနက ဟုတ်လား… ဟုတ်တယ် …
နာမည် ဘယ်သူလဲ ... ဘယ်သူ ....
ဟုတ်မဟုတ် စာရင်းနဲ့ ပြန်တိုက် .....
ဆရာ ဒီ ရင်ထိုး အသစ်လေး ချိန်းပေးပါ ခင်ဗျား…
အခမ်းအနား မစမီ ....
ရင်ထိုးတွေ အဟောင်းတွေ အားလုံး ….
ချက်ချင်း Cancel လုပ်
အသစ် ပြန်ချိန်းခဲ့ရဘူးတယ် …
ရင်ထိုးပျောက်တဲ့ သူကတော့ ...
၀န်ကြီးဌာနတွင်း သတိပေးဆုံးမ မိတဲ့ အပြင် ...
ရင်ထိုး Set တစ်ခုလုံးစာ ပြန်လျှော် လိုက်ရတယ် ....
လူထု အခမ်းအနား လုံခြုံရေးမဟုတ် …
တက်ရောက်သူ ကန့် သတ်ထားတဲ့ …
သီးသန့် အခမ်းအနား လုံခြုံရေး ….
လူထု အခမ်းအနား ပွဲတွေကို ….
လုံခြုံရေး စီစဉ်ရတဲ့ သူတွေ …
ဘယ်လောက် ခေါင်းခြောက်ရမယ်ဆိုတာ ….
အကြမ်းဖျင်း ရိပ်မိလောက်ပြီ ထင်ပါရဲ့ ….
လုံခြုံရေး တာဝန် ထမ်းဆောင်နေရသူတွေကို ...
နည်းနည်းပါးပါး ကိုယ်ချင်းစာနိူင်ဖို့...
လုံခြုံရေး အရ ကိုပဲ ....
အရေးကြီးတဲ့ပရိုဆီဂျာတွေ ချန်ထားခဲ့တယ် ...
ဖတ်ရတာ တစ်ခုခု လိုနေရင် ခွင့်လွှတ် .... ။ ။